Su'aal: Maxaa Sababa Hurdo La'aanta?
Author Topic: Su'aal: Maxaa Sababa Hurdo La'aanta? (Read 79440 times)
« on: June 08, 2009, 10:37:18 AM »
asalamu calaykum walaal waxa jira dad ka cawda hurdo la,aan wax xanuun kale ma jiro hadaba maxaa sababa hurdo waayida habeenkii
Re: Maxaa Sababa Hurdo La'aanta?
« Reply #1 on: June 12, 2009, 12:03:11 AM »
Hurdo la'aantu waxay ka timid dhibaatooyinka la xiriiro hurdada, waxaana lagu gartaa in qofka oo hurdo ku soo dhici karin ama hurdada ku raagi karin.
Noocyada hurdo la'aanta:
1- Hurdo la'aan aan xiriir la lahayn wax xanuun jirka.
2- Hurdo la'aan ka timid cudurro kale sida:
Neefta / Xiiqda: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,351.msg827.html#msg827
Welwelka iyo diiqada: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,872.0.html
Roomatiisamka iyo lafa xanuunka: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5678.msg15241.html#msg15241
Laabjeexa iyo gaaska: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,405.0.html
Xanuun jirka laga dareemo
Waxyaabaha hurdada ka hortaga sida kaffeyga, qaadka, khamriga iyo maandooriyayaasha kale.
Waxaa kaloo hurdo la'aanta loo kala qaadaa hurdo soo booddo ah iyo hurdo la'aan soo raagtay, haddii qofka uu sadax maalin usbuucii uu hurdo la'aan noqdo muddo bil ama ka badan waxaa lagu tiriyaa hurdo la'aan raagtay.
Maxaa keeno hurdo la'aanta?
Asbaabaha keeno hurdo la'aanta soo boodada ah:
Welwelka ka dhasho isbadalka nolosha sida shaqo la waayo, qof aad jeceshahay oo xanuunsado ama dhinta, furriin ama qofka oo safro ama ka guuro meeshuu daganaa
Niyad jabka iyo isku-buuqa
Isbadalka deegaanka sida qeylada, iftiinka, jawiga oo kulul ama qabow intaas waxay kaa qasi karaan hurdada.
Daawooyinka qaar sida kuwa loo qaato hergabka, xasaasiyada, dhiigkarka iyo neefta.
Waqtiga hurdada oo la badalo sida habeenkii oo la shaqeeyo
Asbaabaha keeno hurdo la'aanta raagto waxaa ka mid ah:
Xanuun jirka oo joogto ah
Welwel iyo diiqo joogto ah
Astaamaha lagu garto qofka hurdada ku yar tahay:
Maalintii oo shaqada ama iskuulka lagu hurdoodo
Kacsanaan iyo xanaaq
Hilmaan badan iyo fahmi yari
Sidee loo daaweeyaa hurdo yarida ama hurdo yarida?
Badanaa hurdo la'aanta soo boodada ah wax daawo ah looma qaato, qofka wuu helaa hurdo markii ay ka gudbaan waxyaabaha uu dhibsanayo.
Haddii aad ka welwelsan tahay in hurdo la'aantu ay saameyn ku yeelato shaqadaada ama waxbarashadaada waa in aad dhakhtar la xiriirta si laguugu caawiyo wax hurdo ku siiyo.
Iska ilaali in aad qaadato daawo hurdo oo uusan dhakhtar kuu qorin maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelan kartaa hurdadaada mustaqbalka.
Hurdo la'aanta la xiriirto xanuunada kale waa in la daaweeyaa si qofka u helo hurdo fiican tusaale ahaan hadduu qofka qabo neef ama wadne xanuun waa inuu helaa daawoyinka xanuunadaas.
Talooyin kugu caawin karo hurdo lagu nasto:
Jiifo habeen kasta waqti go'an, iskuna day in aad soo toostid waqti go'an
Ka fogow cabista qaxwada iyo kaffeyga, sigaar cabista, qaad cunista.
Sameey jimisi joogto ah , ha jimicsanin markii aad hurdi rabtid ama 4 saac hurdada ka hor
Haku cashaynin cunno culus
Ka dhig jawiga qolkaaga mid hurdo waa in uu mugdi ahaado, dagan, diiran oo aan buuq lahayn - hadduu buuq jiro dhagaha iyo indhaha daboolo.
Hurdada ka hor ku qubeyso biyo diiran ama akhriso quraan.
Is bar in aadan sariirtaada u isticmaalin wax aan hurdo ahayn, sariirta u aad hurdo kaliya.
Markii aad jiifato haddii aad ka fakarayso wixii maanta aad la soo kulantay isku day in aad ku badasho wixii aad qaban lahayd markii aad soo toostid subaxii.
« Reply #2 on: December 28, 2017, 10:05:35 AM »
Doc, Dadka Da'da ah ama Sheebabka, Mathal 75 jir ilaa 80 jir aya in badan kuu sheegayaa in ay hurdaan 2 ilaa 3 sac habeenkii ayadoo aysan wehlin wax xanuun ah. Marka Dadka nuucaas ah, hurdadooda ma soo yaraataa sidii awal ahayd? Kulamaa da'diisa sii weynato makeentaa hurdo yari?
Views: 91225 January 06, 2015, 08:30:19 PM